Codsiga Diiwaanada Dadweynaha - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Media Center|Codsiga Diiwaanka Dadweynaha
Ogeysiis muhiim ah oo la xiriira COVID-19 dillaaca
ka dib markii ay Baaqa Gudoomiyaha 20-28-8 Wasaaradda Ganacsiga ayaa hakinaysa dhammaan shaqsiyaadka shakhsiyaadka Sharciga Diiwaanada Dadweynaha (PRA) illaa amarku ka dhacayo. Tan waxaa ka mid ah waxqabadyada u oggolaanaya codsade inuu u soo maro xafiis kasta oo Ganacsi ama xarun inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si: loo soo gudbiyo codsi PRA ah, si jireed loo baaro diiwaanada ama habraacyada hay'adda PRA, nuqul nuqulada, iyo in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo kale oo socod-socod ah inta lagu jiro saacadaha ganacsiga sida iyo / ama soo qaado nuqulada diiwaanada.
Codsadayaashu way sii wadi karaan inay ku soo gudbiyaan codsiyada taleefan, emayl ama Boostada Mareykanka. Faahfaahinta xiriirka waxaad ka heli kartaa bogga hoose.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo la xidhiidha Codsiyada Diiwaanka Dadweynaha ee Wasaaradda Ganacsiga, fadlan nagala soo xidhiidh (360) 725-2706.
Maxay yihiin Diiwaanada Dadweynaha?
Sharciga Diiwaanka Dadweynaha ( Cutubka 42.56 RCW) waa sharci Gobolka Washington kuu ogolaanaya inaad dib u eegto diiwaanada dawlada. Diiwaanka dadweynaha waxaa ku jira dukumiintiyo nooc walba leh, ha ahaato elektaroonig ama warqad, oo la xiriirta howlaha dowladda ama dhaqanka. Dhammaan dukumiintiyada Ganacsiga waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin diiwaanno guud, waxayna ku xiran yihiin dib-u-eegis dadweyne, haddii uusan sharci si gaar ah uga dhaafin macluumaadka qaarkood shaacinta.
Waa maxay diiwaanada laga reebay shaacinta?
Ka-dhaafitaannada waxay ku qoran yihiin Sharciga Diiwaanka Dadweynaha, halka kuwa kale laga helo meelo kale Sharciga Washington iyo Federaalka. Qaar badan oo ka-dhaafitaannadaas waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda asturnaanta iyo danaha ganacsi ee sharciga ah.
Kawaran haddii aan su'aal kaliya qabo ama aan doonayo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shaqada Ganacsiga?
Su'aalaha guud ama codsiyada macluumaadka caadi ahaan maahan Codsiyada Bixinta Dadweynaha. Ganacsiga looma baahna in la abuuro diiwaanno cusub, la ururiyo ama la falanqeeyo macluumaadka, ama lagu sameeyo cilmi baaris xagga sharciga ah sida ku xusan Sharciga Diiwaanada Dadweynaha. Haddii aad hayso su'aalo guud ama aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Waaxda Ganacsiga oo aadan ka heli karin degelkeenna, fadlan nala soo xiriir:
Sideen ku codsadaa nuqul ka mid ah dukumintiyada dadweynaha?
Fadlan iimayl u dir codsigaaga publicdisclosure@commerce.wa.gov. Ku dar magacaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka iimaylkaaga, iyo sharaxaadda diiwaanada aad codsanaysid. Codsiga waa inuu noqdaa diiwaan gaar ah oo la aqoonsan karo ama diiwaanno taxane ah. Markaad si sax ah u aqoonsato diiwaanka aad raadineyso, ayaa kaa waxtar badan oo wax ku ool ah waxaan ku noqon karnaa helitaanka iyo bixinta dukumintiyada ku habboon.
Codsiyada Bixinta Dadweynaha waxaa sidoo kale lagu gudbin karaa boostada:
Codsiyada Siideynta Dadweynaha
Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Haddii aad u baahan tahay gargaar gudbinta codsigaaga, fadlan soo wac (360) 725-2706.
Goorma ayaan helayaa jawaab ku saabsan codsigayga shaacinta dadweynaha?
Waxaad jawaab ku heli doontaa shan maalmood oo shaqo gudahood. Waxaan uga jawaabi doonaa mid ka mid ah dhowr siyaabood:
Bixi diiwaanada (ama iskuxirka qaybta shabakadeena ee ay kujiraan diiwaanada).
Waxaan dalban karnaa cadeyn.
Haddii dukumiintiyada aan si fudud loo heli karin, waxaan ku siin doonaa qiyaas macquul ah waqtiga ay nagu qaadaneyso inaan soo saarno diiwaanada.
Codsiyada waaweyn qaarkood, waxaa laga yaabaa inaan ku soo saarno diiwaanada qayb ahaan ama qayb ahaan. Waxaan sidoo kale bixin doonnaa waqtiga la qiyaasayo ee gaarsiin kasta oo koror ah markaan ku shaqeyno codsigaaga.
Markii laga dhaafo sharciga, waan diidi karnaa codsiga gebi ahaan ama qayb ahaan, anaga oo haynna diiwaanada la codsaday ama dib-u-casriyaynayno dukumintiyada, oo ay ku jirto sharraxaadda diidmada.
Ma waxaa jira lacag?
Waxaa laga yaabaa in lacag laga qaado diiwaannada elektiroonigga ah ee lagu bixiyo elektaroonig ahaan. Wax lacag ah lagaama qaadayo kormeerka shaqsi ahaaneed ee diiwaannada dadweynaha. Waxaa laga yaabaa inaan ka qaadno 15 senti bog kasta nuqulada waraaqaha ee diiwaanada ama kharashyada kale ee dhabta ah ee la xiriira dirista ama soo saarista diiwaanada.
Faahfaahin ku saabsan khidmadaha Wasaaradda Ganacsiga, fadlan eeg jadwalka khidmaddayada. (PDF)